Uyini inkathi? Okusho umqondo enezici
Ezweni kukhona abaningi imiqondo eziphathekako abstract ababewazi futhi multi-zenani, kudliwe amagatsha abaningi besayensi nokuphila kwansuku zonke. Phakathi kwazo yigama elikhulu. Ukuze siqonde ukuthi le nkathi, ungakwazi ubheke Dictionary. Babanika incazelo enjalo leli qiniso.
Kuyini "isikhathi" kusichazamazwi?
Ngakho, Dahl ufunde ukuthi isikhathi ukuthi inquma isikhathi esehlakalweni eyodwa kuya kwenye. Lokho: isikhathi, isikhathi umcimbi noma isenzo.
Ngo Ozhegova, isibonelo, liphinde nenkathi ethile yesikhathi (esidlule noma esamanje), lapho umcimbi uqala, eba, uphela. Lokho - kuhilela izenzo ashukumisayo.
Ngokuvamile lokhu umqondo isetshenziswa kulo mqondo. Okungukuthi, esinazo emqondweni noma iyiphi inkathi nesikhathi esithile lapho izenzakalo zenzeka noma ziye zenzeka. Cishe ngesikhathi - kungcono igebe eliphikisa elinye izingxenye. Le nkathi, phakathi kwesikhathi lapho kwenzeka okuthile (njengoba kuchaziwe Ushakov). Uyini inkathi? Ingxenye, ngesikhathi lapho abanye inqubo iterative (incazelo yesayensi) uDavide uqala futhi aphethe.
Emlandweni yokwakheka komhlaba
Ngokuvamile waqamba lowo mbono wesayensi Geological yomlando. Ngakho, lapho ngokuvamile wamukela futhi kahle kuchazwa izinkathi emlandweni womhlaba. Ngokwesibonelo, kusukela ekwakhekeni Precambrian planethi phambi eCambria (4.6 billion - iminyaka 541 kwezigidi ezingu edlule). Siphila nawe isikhathi eziNgekho ngaPhansi kukaHulumeni, elaqala eminyakeni engaphezu kuka-2.5 million edlule futhi uyaqhubeka namuhla. Lona esifushane, kodwa libhekene ezifana izenzakalo ezinkulu njengoba ukubukeka nokuthuthukiswa kwesintu, isibonelo.
nezikhathi zomlando ayisibonelo ukuvela nokuthuthukiswa lamazwe nabantu. Asho ukuthini le periodization yomlando? Lena ngokuyinhloko ukwahlukana ezivamile yomlando zibe izingxenye kanye nohlaka oluthile kwezenzakalo. Ngakho, ngo-periodization classical labelwe izinkathi ezahlukene: nezakudala futhi lasendulo, ephakathi, nokunye. Siphila ezikhathini zanamuhla.
Uyini isikhathi izibalo? Ngokuphathelene umsebenzi - value ukuthi asishintshi ukubaluleka kwaso kwalokho. Kwabe sekuqala inkathi okwakungenziwa izinombolo wamaqhuzu - iinqhema kwamadijithi amafraktjhini ezithile engapheli zokuqopha uhlelo.
I-physics kwesikhathi oscillation - ubuncane isikhathi sokuphumula okuyiwona kukhona umjikelezo ephelele oscillation (idivayisi ukuthi ukhiqiza isignali kuyaphindeka kuphambuka inkomba isikhundla bese emuva uqobo).
Isikhathi ezimali yokubika - isikhawu sesikhathi ngokuhlola nezenzo yenkampani - ukuthengwa nokudayiswa kwemikhiqizo, ukukhiqizwa yabo kanye nokuhlinzekwa kwemisebenzi - esetshenziswa ekulungiseleleni imibiko.
I-chemistry kohlelo phakathi Mendeleev - zintambo izakhi inani elifanayo electron amagobolondo.
Kwezemidlalo, isikhathi umdlalo - omunye izingxenye ezintathu umdlalo ice hockey noma ebhishi football.
Kuyini kwesikhathi Musically? Lona owesincane eseqedile izakhiwo esiyinhlanganisela, ezwakalisa umqondo ophelele zomculo.
Alpine ukusonga: ukwakha izici. Intaba Alpine ukusonga
Montenegro - lizwe encane kunawo wonke-European. Ethakazelisayo Montenegro
Kanjani ukuba babhale indaba ngesihloko esithi "isiRashiya" (CSE)?
Izibonelo kuveza esifundweni. Ukuqhuba isifundo esikoleni sabaqalayo
Kanjani ukuba babhale indaba ngesihloko esithi "Injabulo": imithetho eziyisisekelo kanye nezimiso indzabambhalo
Tento lisusiwe Okuqhubekayo: izici, isibonelo imisho namathebula
Ukupheka ujamu kusuka amajikijolo ebusika
Bone emlenzeni. imbande Wamathambo "Hallyufiks" ekwelapheni ithambo: Izibuyekezo
Indlela ukuxhuma isithwebuli ibhakhodi kukhompyutha. Izinhlobo ibhakhodi scanner. Izinhlelo ngoba barcodes
UKhayini no-Abela: umlando isintu umthole oyoxoxa emfushane
Isimo sezomthetho mayelana Nelungelo ngabanye
Pancake amnandi aluhlaza ngokukhulu ukushesha.
Ukulungiselela imoto ebusika - nokuvimbela "isifo"
Kuyini kwezentengiselwano? Abamele mercantilism. Mercantilism kwezomnotho
FTTx ubuchwepheshe - noxhumano lwe-Inthanethi